» ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ३ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ३ (भिडियो)
२३ भाद्र २०७६, सोमबार १७:४१
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २३ भदौ । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्लाईन्ड अडिसन राउण्ड चलिरहेको छ । यस अघिको भिडियो सामाग्रीको पहिलो र दोस्रो भागमा अहिलेसम्म ब्याटल राउण्डका लागि छानिएकाहरुमध्ये १० जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिसकिएको छ । यदि तपाईले उक्त भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा लिंक राखिएको छ । भिडियोको यो तेस्रो भागमा ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका थप ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेरौँ यो भिडियो–
सोनिया राई, खोटाङ – आमासँग बस्दै आएकी सोनिया बुवाको मायाबाट बञ्चित छिन् तर उनी आमासँग खुशी छिन् । आमाको संघर्ष देखेकी सोनिया आफ्नी आमालाई रोल मोडल बताउँछिन् । २५ वर्षीया सोनियाले अरुणा लामाको ‘लहरे बर’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको गीत सुनेर कोच प्रमोद र कोच आश्था फर्किएका थिए । उनी कोच आश्थाको टिममा छिन् ।
सुशान्त गौतम, ईलाम – ईलामका २२ वर्षीय सुशान्त आफुलाई मन लागेको कुरा गर्न रुचाउँछन् । उनी आफु संगीतमा निरन्तर लागिरहेको बताउँछन् । उनले ब्लाईन्ड अडिसनमा द एज ब्याण्डको ‘थाहा छैन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सिजन २ मा चारै जना कोचलाई आफुतिर फर्काउन सफल चौथो प्रतियोगी हुन् । उनी कोच प्रमोदको टिममा छन् ।
सुरजराज खत्री, काँडाघारी– कक्षा १० सकिएपछि गीतार कक्षा लिएका सुरजले प्लस टु पछि भोकल कक्षा लिएका थिए । परिवारको साथ पाएका १९ वर्षीय सुरजले ब्लाईन्ड अडिसनमा सुनिल गिरीको ‘कस्तो यो मन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले कोच आश्थालाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएका थिए ।
रेवन लामा,जोरपाटी– संगीतलाई आफ्नो सहयात्री ठान्ने रेवन व्यवसायसँगै संगीतलाई अगाडि बढाउन चाहान्छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि कतारमा समेत जीवन विताएका रेवनलाई संगीत छोडेर विदेश गएकोमा साथीहरुले निकै गाली समेत गरे । उनीहरुकै हौसलाका कारण उनी विदेशबाट फर्किए र वि.सं. २०७२ पछि संगीत क्षेत्रमा निरन्तर लागे । २९ वर्षीय रेवनले रविन शर्माको ‘तिमी यसै लजायौ’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले कोच दिप र कोच राजुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएका थिए । उनी कोच राजुको टिममा छन् ।
अंकित बस्नेत, खुमल्टार, ललितपुर– सानैदेखि संगीतमा लागेका अंकित आमाको भजनबाट प्रभावित भएर गायन क्षेत्रमा लागेका हुन् । संगीतलाई जीवनको सुखदुखसँग जोडेका उनी आफ्नो प्रतिभा भ्वाईसमार्फत प्रस्तुत गर्न पाएकोमा गर्व महशुस गर्छन् । २३ वर्षीय अंकितले ब्लाईन्ड अडिसनमा ‘नमान लाज यसरी’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको आवाजले कोच दिपलाई फर्काउन सफल भएको थियो ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यी ५ प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ? तपाईको विचारमा कुन प्रतियोगीहरु फाईनलसम्म पुग्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोको चौथो भागका साथै भ्वाईस अफ नेपाल सम्बन्धी अन्य जानकारीहरुका लागि हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु पनि हेर्न नभुल्नुहोला ।